यस डिजाइनर एक्लै Crocs लोगो सुधार गर्दछ क्रिएटिव अनलाइन
यो आरCrocs जुत्ता ब्रांड लोगो डिजाइन यो मोतीबाट आउँदछ कि कसरी मूल लोगोको सार क्याप्चर गर्ने र कसरी यसलाई नयाँमा लैजाने भनेर जान्नको लागि। यसका साथ हामी यो भन्न सक्दैनौं कि तिनीहरू सहि थिए, तर यसले यो बुझाउन महत्वपूर्ण छ कि कसरी ब्रान्डको सार क्याप्चर गर्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यस अवस्थामा यो क्रोक्स र उनका जुत्ताहरू गोहीको रूपमा मुख्य पात्र र त्यो मुस्कान जुन हाम्रो अनुहारमा मुस्कान उत्पन्न गर्न सक्षम छ। त्यो पक्ष हो लापरवाह Crocs जसले पूर्ण रूपमा नयाँ लोगो लिएको छ, अझ आधुनिक मोडमा भए पनि।
हामी त्यो लापरवाही मुस्कानको साथ सेतो मा गोहीबाट गयौं गोहीको आफ्नै छविमा तर यसको सिल्हूटको साथ र जुत्ता जस्तो देखिन्छ। यो विचार आफै राम्रो छ, तर हुनसक्छ यो ब्रान्डको आफ्नै मूल सौन्दर्यबाट टाढा छ।
@ क्रोसका लागि लोगो रिब्रान्ड - २००२ मा स्थापना भएको र १ अर्ब डलरभन्दा बढीको वार्षिक आम्दानीसहित क्रोक्स विश्वको सबैभन्दा ठूलो फुटवेयर कम्पनीमध्ये एक भएको छ। ऐतिहासिक रूपमा 'कुरूप' कार्यक्रमको रूपमा परिचित, क्रोक्स भर्खरका वर्षहरूमा काम गर्ने कलाकारहरू र फेसन भ्यागुअर्डको मनपर्दो बन्न पुगेका छन् नयाँ दर्शकहरूसँग बोल्नको लागि तिनीहरूको प्रसिद्ध सिल्हूटलाई पुनर्जीवित गरेर। यो रिब्रान्ड अवधारणा आइकनिक सिल्हूटबाट प्रेरित भयो जुन उनीहरूको मस्कट 'क्रोक' को आधारका रूपमा हुन्। म अरू के भन्न सक्छु? मलाई मेरो क्रोक्स मन पर्छ!
एक पोस्ट द्वारा साझा गरिएको स्टीफन Kelleher (@ stepshen.kelleher.studio) मा अगस्ट 6, 2019 मा 8: 55AM पीडीएफ
वास्तवमा, यो जुत्ताको बारेमा यत्तिको स्पष्ट छ कि यो पारित गर्न सकिन्छ, किनकि कहिलेकाँही स्पष्ट रूपमा चिनिने ब्रान्डमा स्पष्ट पनि, प्रतिक्रियात्मक हुन सक्छ। आश्चर्यजनक कुरा यो हो कि यो पुनः डिजाइन समान ब्रान्डले कमिसन गरेको छैन, तर भएको छ डिजाइनर स्टीफन Kelleher एक जसले यो पूरा गर्‍यो।
धेरैका लागि यसले मूललाई ​​सुधार गर्दछ र वास्तवमा जुत्ताको सिल्हूटको हाइलाइटले चार खाली सर्कलहरू नेलमा हिर्काउँछ ताकि गोही देखापर्नेछ र यसको लापरवाह उपस्थिति पनि हराउँदैन।
अन्य डिजाइनरहरू कहिलेकाहीं भन्छन् र कसरी टोकियो २०२० ओलम्पिक खेलको लोगोको साथ भयो, कहिलेकाँही एक डिजाइनर बाहिर डिजाइन redesign ब्रान्डको अनुमति बिना, यसले सुधार गर्दछ एजेन्सीले के हासिल गर्न सक्छ; यसको लागि बनेको परिणामी उच्च भुक्तानीको साथ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » क्रोकस जुत्ता ब्रान्ड लोगोको अवधारणाले यसलाई स्फूर्तिदायी नयाँ "लुक" दिन्छ